Izixhumi ze-harting: okudingayo ukwazi ngalezi zixhumi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Mhlawumbe uzwile ngefayela le- Izixhumi ze-Harting yingakho uze kule ndatshana ufuna imininingwane, noma mhlawumbe uyithole ngengozi. Kokubili kokunye, lapha ngizozama ukwenza ukucaciseleka ngalolu hlobo lwezixhumi nemikhiqizo ethakazelisa kakhulu.
Zithandwa kakhulu ku- izicelo zezimboni nobunjiniyela, kepha zingasiza abanye abenzi kanye namaphrojekthi wabo we-DIY Arduino. Kungakho kufanele wazi okuningi ngalokho uHarting angakulethela khona ...
Imininingwane engaphezulu ngezinye izinto ze-elekthronikhi ezingakuthakazelisa kumaphrojekthi akho lapha.
1 Mayelana neHarting
2 Isixhumi seHarting Han
2.1 Amamodeli wokuxhuma we-Han
3 Ungayithenga kuphi imikhiqizo ye-Harting?
ukuhlukumeza iyinkampani eyasungulwa nguWilhelm noMarie Harting ngo-1945. Konke kwaqala njengenkampani encane egalaji elingamamitha-skwele ayi-100 nje kuphela, esitolo sokulungisa esiseMinden, eJalimane. Lapho baqala ukwenza izinto zikagesi ezizosetshenziswa nsuku zonke, ezinjengezibani zokonga ugesi, izipheki zikagesi, imishini yocingo olufakwe ugesi, izinsimbi ezishaywayo, amalambu kagesi, izinsimbi zezingubo, njll.
UWilhelm Harting wayeqonda ukuthi imboni yaseJalimane yayidinga imikhiqizo yezobuchwepheshe, ngakho-ke wayezinikele kusukela ekuqaleni ukudala le mikhiqizo nokufeza izinhloso zabo ngekhwalithi nangokuqamba izinto ezintsha. Imikhiqizo yabo yatuswa kakhulu nge-r yaboukuqina, ukusetshenziswa okulula nokusebenza okuhlukahlukene. Eqinisweni, ifilosofi kaHarting yaboniswa emshweni kaWilhelm: 'Angifuni ukuthi kubuyiswe noma yimuphi umkhiqizo".
Ngemuva kwalokho Ukushona kukaWilhelm ngo-1962UMarie Harting uthathe le nkampani okwesikhashana, kwaze kwaba yilapho amadodana akhe amabili uDietmar noJürgen Harting bethatha izintambo naye. Ngo-1987, uMargrit Harting naye wayezojoyina ibhizinisi lomndeni wakhe uDietmar, manje esengomunye wabalingani bebhizinisi. Namuhla, uPhilip FW Harting noMaresa WM Harting-Hertz bayisizukulwane sesithathu esilawula le nkampani yodumo ...
Ngemuva kokudala zonke izinhlobo zemikhiqizo, bakha Isixhumi se-Han, Umkhiqizo ophathelene ne-Harting obuyimpumelelo enkulu emakethe futhi obuzozibonakalisa njengezinga lomhlaba jikelele. Le ngxenye yaba i-axis esemakethe enkulu kulo lonke iqembu lobuchwepheshe.
Kancane kancane ikhule ngenani lamalungu nasezitshalweni zokukhiqiza, impumelelo ngemuva kwempumelelo. Njengamanje sebenazo Izitshalo zokukhiqiza eziyi-14 nezikhungo zokuthengisa ezingama-43 emhlabeni jikelele. Manje bazisungule njengomunye wabahlinzeki abahola phambili emhlabeni bezisombululo zokuxhuma ezimbonini zedatha, isiginali namandla kagesi.
Ngaphezu kwezixhumi, inkampani ibuye ikhiqize nezinye izinto, njengamabhokisi okubhalisa e-elektroniki okusetshenziselwa ukuthengisa, ama-actuator kagesi womkhiqizo wezimoto nezimboni, amadivayisi wokushaja, izintambo zezimoto, kanye nezinye izinhlobo zehadiwe kanye nesoftware yezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene, phakathi kwazo okutholakala i-robotics.
Isixhumi seHarting Han
Omunye wemikhiqizo yawo yezinkanyezi, njengoba ngiphawulile, ngu Isixhumi se-Han nguHarting. Kunezinhlobonhlobo zazo futhi zibonakala ngokulula kwazo nokuphatha ngokushesha, ukuqina abakunikezayo, ukuguquguquka kokusetshenziswa, umjikelezo wokuphila okuhlala isikhathi eside, kanye nethuba lokuhlangana ngaphandle kokusebenzisa noma yiluphi uhlobo lwamathuluzi.
Lesi sakamuva sithi kubaluleke kakhulu, ngoba izixhumi eziningi ezikhona enkampanini, noma ngabe zisetshenziselwa izimboni noma zanoma ikuphi okunye ukusetshenziswa, ngaso sonke isikhathi zisho ukusebenzisa amanye amathuluzi ukufakwa kwazo.
Ngaphezu kwakho konke lokho, isixhumi seHarting Han naso besilokhu sikhona ivikelwe (IP) ukuze ikwazi ukumelana nezimo ezithile zangaphandle zomswakama, uthuli, izidumbu zakwamanye amazwe, ukushaqeka kwemishini, uketshezi oluchithekile, njll. Vele, ukuvikelwa kuqinisekisiwe ngaphansi kwamazinga IEC 60 529 ne-DIN EN 60 529.
Imininingwane engaphezulu ngo-Han nezinsiza
Amamodeli wokuxhuma we-Han
Lezi zixhumi zezimboni zikaHartig Han bezilokhu zikhona yakhelwe ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zezimboni, ezentengiso, ezolimo, ukuze zisetshenziswe kumasifundisane, nezinye izinhlobo zezinhlelo zokusebenza. Konke ngenxa yokuhlangana kwayo okulula nokwenziwa kwemishini, ugesi nokuvikelwa kwezinye izimo zangaphandle.
Izixhumi zeHartin zihlukaniswa ngokohlelo lwazo, inani lamapali, amandla kagesi kanye nokumelana kwamanje, kugqamisa okulandelayo izinhlobo:
UHan D / DD
I-Han E / EE
UHan Hv E
Ukudonsa kukaHan Push
Ngokuvamile, banelisekile ngezinto ezifana ne-hood nesisekelo, ngaphezu kokuhlukahluka kokuthi ngabe zikhona yini abesilisa noma abesifazane, yezinhlobo ezahlukahlukene zemihlangano. Futhi-ke iHarting nayo inezinhlobo zonke zezesekeli ezingeziwe njengezintambo, amabhokisi, okufakwa, njll.
Ungayithenga kuphi imikhiqizo ye-Harting?
Ungakwazi thenga lezi zixhumi neminye imikhiqizo Ukuharting ezitolo ezikhethekile ezahlukahlukene, kanye nakwezinye izingosi eziku-inthanethi ezizithengisayo. Amanani abo ahluke kakhulu ngokuya ngohlobo lomkhiqizo okhethiwe, kepha nansi amaphuzu avelele:
Isixhumi sesilisa seHarting 10m Ethernet
Isixhumi se-Harting IDC se-PCB - Iphakethe lamayunithi ama-3
I-Crimper yeHarting Han D, S no-C
IHarting D-Sub yokunamathisela kwi-PCB noma yesokhethi
IHarting 232 pin RS-9 Serial
Harting Series Plug 25 iphini
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » Izixhumi ze-harting: okudingeka ukwazi